Enigma nke ime ụlọ 622: Joël Dicker's Thriller kacha ọhụrụ | Akwụkwọ ugbu a
John Ortiz | | Akụkọ ndụ, Akwụkwọ, Black akwụkwọ
Etu ilu nke ime ụlọ 622 bụ akwụkwọ akụkọ kacha ọhụrụ site n'aka onye edemede Switzerland Joël Dicker. E bipụtara nsụgharị mbụ ya n'asụsụ French na Machị 2020. Ọnwa atọ ka nke ahụ gasịrị, ewepụtara ya n'asụsụ Spanish, yana Amaya García Gallego na María Teresa Gallego Urrutia sụgharịrị ya. Dị ka ọrụ ndị gara aga, ọ bụ a thriller.
Agbanyeghị na protagonist nwere otu aha onye dere ya, ọ bụghị akụkọ ndụ ya. Banyere, Dicker na -ekwusi: “… enwere obere akụkụ nke m, mana anaghị m akọ akụkọ ndụ m, anaghị m akọ onwe m... ". N'otu aka ahụ, onye edemede dere nraranye pụrụ iche n'akwụkwọ akụkọ: “Nye onye nchịkọta akụkọ m, enyi m na onye nkuzi m, Bernard de Fallois (1926-2018). A na -atụ anya na ndị edemede niile nọ n'ụwa nwere ike izute ụdị nchịkọta akụkọ a pụrụ iche otu ụbọchị. "
1 Nchịkọta nke akụkọ ihe mere eme nke ime ụlọ 622
1.1 Mmalite nke afọ
1.2 Ọmarịcha nzute
1.3 Ịhụnanya na -adịte aka
1.4 Ihe niile dakpọrọ
1.5 Njem gaa ugwu ugwu
1.6 Onye edemede agbata obi
1.7 Ọganihu nyocha
2 Nkọwa nke akụkọ banyere ime ụlọ 622
2.1 Data ndabere nke ọrụ
3.1 Joël Dicker akwụkwọ
Na nchikota nke Etu ilu nke ime ụlọ 622
Mmalite nke afọ
Na Jenụwarị 2018, Joël gafere oge ihe isi ike na ndụ ya: Bernard de Fallois, ezigbo enyi ya na onye nchịkọta akụkọ, anwụọla. Nwoke ahụ abụwo onye nnọchianya na ndụ nwa okorobịa ahụ. Ọ ji ya ihe ịga nke ọma n'ọrụ ya dị ka onye edemede, ya mere o kpebiri ịsọpụrụ ya. Ozugbo, ọ gbabara n'ọfịs ya iji dee akwụkwọ a raara nye onye ndụmọdụ ya Bernard.
Joël bụ onye edemede dịpụrụ adịpụ; n'eziokwu, ọ na -ejigide kọntaktị ya na Denise kwesịrị ntụkwasị obi ugboro ugboro. Ọ bụ ya na -agba ya ume kwa ụbọchị ka ọ nweta ikuku na mgbatị ahụ. Otu ụbọchị mgbe ọ si ọsọ na -alọta, ọ dabara na Sloane, onye agbata obi ọhụrụ ya. Agbanyeghị na ha gbanwere naanị okwu ole na ole, nwa agbọghọ ahụ mara mma na -amasị ya.
Ịhụnanya na -adịte aka
Kemgbe ahụ, Joël nwere mmasị ịmatakwu banyere SloaneMa, obi akaghị ya ịjụ ya. Otu abalị Eprel, naanị na ohere, ha na -adaba n'ịgba egwu opera, ha na -ekwu okwu ma emechaa ihe ahụ, ha apụ gaa rie nri abalị. Site n'ebe ahụ, ha abụọ na -ebi ọnwa abụọ nke oke agụụ nke na -emikpu Jöel n'ihe ọ weere dị ka obi ụtọ zuru oke. Dị ka mgbakwunye, ọ na -aghọ ihe ngosi nka nke na -enye ya ohere ịga n'ihu n'akwụkwọ ahụ iji sọpụrụ Bernard.
Ihe niile dakpọrọ
Nke nta nke nta Joël lekwasịrị anya na ide ihe karịa iwepụta oge ya na onye ọ hụrụ n'anya. Mmekọrịta ahụ bụ naanị ihe na -adịghị anya, nke butere mmekọrịta dị ka nke zuru oke. Sloane kpebiri ịkwụsị ya niile site n'akwụkwọ ozi ọ ga -eso onye na -elekọta ụlọ. Idyll Joël dara mgbe ọ gụchara akwụkwọ ozi ahụ, yabụ na o kpebiri ịgbapụ ebe ahụ ozugbo ịchọ udo.
Njem gaa ugwu ugwu
Nke ahụ bụ otú Joël na -agbago n'ụlọ nkwari akụ Palace a ma ama na Verbier na mpaghara Alps nke Switzerland. Mgbe ị bịarutere, nkọwa pụrụ iche na -adọrọ uche onye edemede: ụlọ nke Ha ekenyela gị ka ị nọrọ bụ 621 ma nke dị n'akụkụ ya bụ "621 bis". Mgbe ha na -agba izu, ha na -akọwa na ọnụ ọgụgụ ahụ bụ n'ihi mpụ e mere ọtụtụ afọ gara aga n'ime ụlọ 622, ihe omume nke edobebeghị.
Onye edemede agbata obi
Scarlett na -anọkwa na họtel ahụ, onye nkuzi mmụta mmụta onye gara ebe ahụ iji kpochapụ ya mgbe ịgba alụkwaghịm ya gasịrị. Ọ nọ n'ime ụlọ 621 bis, mgbe o zutere Joël ọ rịọrọ ya ka o jiri ụfọdụ usoro ide ihe kụziere ya ihe. N'otu aka ahụ, ọ na -agwa ya gbasara oke okwu gbara ya gburugburu ebe ọ nọ ma kwenye ya ka ọ nyochaa ikpe ahụ iji dozie ya.
Ka nyocha ahụ na -aga n'ihu, Joël na -achọpụta ihe ndị dị mkpa gbasara igbu mmadụ. N'oge oyi nke 2014 ndị isi ụlọ akụ Switzerland Ebezner na -ezukọ na họtel ahụ ịhọpụta onye isi ala ọhụrụ. Ha niile nọrọ na Verbier maka abalị mmemme ahụ. N'ụtụtụ echi ya ọ dị ka ọ nwụrụ anwụ otu n'ime ndị isi: onye ọbịa nọ n'ime ụlọ 622.
Di na nwunye ahụ na -atụghị egwu na -ekpughere ọtụtụ ihe nzuzo na -eduga ha na onye ahụ gburu ọchụ. Nke a bụ ka ihe nka, atụmatụ, aghụghọ, ịhụnanya triangles, nrụrụ aka na egwuregwu ike gbara ndị isi ụlọ akụ Switzerland ga -esi pụta ìhè.
Nyocha nke Etu ilu nke ime ụlọ 622
Etu ilu nke ime ụlọ 622 Emere ya 624 peeji, kewara n'ime 4 isi akụkụ mepụtara na 74 isi. Akụkọ ihe mere eme bụ agụrụ na onye nke mbụ na nke atọ, na olu akụkọ na -agbanwe n'etiti mkpụrụedemede dị iche iche. N'otu aka ahụ, n'ọtụtụ oge nkata ahụ na-aga site ugbu a (2018) gaa n'oge gara aga (2002-2003); nke a ka ịmata nkọwa gbasara ogbugbu ahụ yana ndị o metụtara.
N'ime akwụkwọ a onye ode akwụkwọ kwuru ụdị agwa dị iche iche e mere nke ọma na-apụta n'ime akụkọ ahụ. N'ime ha, ndị na -akwado ya pụtara:
Kekọrịta onye edemede ma aha ya na ọrụ ya dị ka onye edemede. Ọ gara Alps iji kpochapụ onwe ya mgbe ihe mberede abụọ gasịrị. N'ebe ahụ, ekele nwanyị mara mma ma na -atọ ụtọ, ọ dabara na nyocha igbu ọchụ. N'ikpeazụ, ọ na -achọpụta onye ahụ gburu ọchụ ma kpughee oke nrụrụ aka gbara okwu a gburugburu.
Ọ bụ onye na -ede akwụkwọ na -enweghị uche na o kpebiela iji ụbọchị ole na ole dị iche iche site na nkewa alụmdi na nwunye ya n'oge na -adịbeghị anya. Ọ na -anọ n'ime ụlọ dị n'akụkụ Joël Dicker, yabụ na ọ na -erite uru n'ịmụta usoro onye edemede a ma ama. Ọ Ọ ga -enyere aka nke ukwuu n'ịchọpụta ogbugbu dị omimi nke mere ọtụtụ afọ gara aga.
Joël dicker mụrụ na June 16, 1985 na Geneva, Switzerland. Ọ bụ nwa onye na -ere akwụkwọ Geneva na onye nkuzi French. Ọzụzụ ụlọ akwụkwọ ya bụ n'obodo ya, na Collège Madame de Staël. Na 2004 -Tupu ịbanye mahadum- gara klaasị ime ihe nkiri na Paris otu afọ. Ọ laghachiri Geneva, na na 2010 ọ nwetara akara mmụta iwu na Université de Genève.
N'oge mmalite ya dị ka onye edemede biri akụkọ na -atọ ụtọ al ka a ghara ime gị n'asọmpi akwụkwọ ntorobịa. Dicker ewepụtala akaụntụ ya Agụ (2005), mana a jụrụ ya n'ihi ndị juri ahụ weere na ọ bụghị ya kere ọrụ ahụ. E nyeziri ya ihe nrite mba ụwa maka ndị edemede na-eto eto na-asụ French wee bipụta ederede na akụkọ ifo na akụkọ mmeri ndị ọzọ.
N'otu afọ ahụ debanyere aha na Prix des Ecrivains Genevois (asọmpi maka akwụkwọ a na -ebipụtabeghị), na akwụkwọ akụkọ Oge ikpe-azụ nke nna anyị ha. Mgbe ọ bụ onye mmeri, o jisiri ike bipụta ya na 2012 dị ka akwụkwọ ọrụ mbụ ya. Site n'ebe ahụ, ọrụ onye ode akwụkwọ na -arị elu. Ọ nwere aha anọ dị ugbu a bestsellers na nke o jiri merie ndị na -agụ ya ihe karịrị nde 9.
Joël Dicker akwụkwọ
Oge ikpe-azụ nke nna anyị ha (2012)
Enigma nke ụlọ ahụ 622 (2020)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Black akwụkwọ » Etu ilu nke ime ụlọ 622
Septemba. Nhọrọ nke akụkọ akụkọ